Multi-Vitamin: ယာဉ်ရပ်နားချိန်ပို ဒဏ်ကြေး ဒေါ်လာ ၁၀ပြားကို ၅၇နှစ်အကြာမှာ ရဲစခန်းကို လာရောက်ပေးအပ်
ယာဉ်ရပ်နားချိန်ပို ဒဏ်ကြေး ဒေါ်လာ ၁၀ပြားကို ၅၇နှစ်အကြာမှာ ရဲစခန်းကို လာရောက်ပေးအပ်
နိုဝင်ဘာ ၁ရက်နေ့တုန်းက ယောက်ခ်(York) ရဲစခန်းမှုးကြီး ဒွန်ကလတ်(Don Klug)တစ်ယောက် သူ့စားပွဲပေါ်မှာ ယောက်ရဲဌါနက ထုတ်တဲ့ ဇူလိုင် ၁၃၊ ၁၉၅၄ခုနှစ် ညနေ ၃နာရီ ၂၀ရက်စွဲပါ ယာဉ်ရပ်နားချိန်ပို ဒဏ်ကြေး လက်မှတ်လေးနဲ့ ပေးဆောင်ရမယ့် ဒဏ်ကြေး၁၀ပြားစေ့ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ
တော်တော် အံ့သြသွားပါတယ်။ အမည်မသိ လူတစ်ယောက်က ဘောင်ခတ်ထားတဲ့
ဖြတ်ပိုင်းလေးနဲ့ ပိုက်ဆံကို လာရောက်ပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ပင် ချန်မသွားတဲ့ လာရောက်ပေးသွားတဲ့လူက ဒီဒဏ်ကြေးဖြတ်ပိုင်းကို သူ့အမေကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကြားမှာ အိမ်ရှင်းရင် တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့အမေက ယောက်ခ်(York)ကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာက လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ဒီဖြတ်ပိုင်းကို ပေးဖို့မေ့ခဲ့တာ
ဖြစ်နိုင်ပြီး... အခုလို ပြန်ပေးရှာတွေ့အခါ ပေးဖို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး လှည့်ပြန်သွားခဲ့တာပါ။
ရဲမှုးကြီး ကလပ်က 'အခုလို ၅၇နှစ်ကြာတင်ရှိနေတဲ့ ဒဏ်ကြေးအကြွေးကို အခုလို လာရောက်ပေးတာ.. ဒါဟာ တကယ့် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ... နောက်ပြီး တခြားလူရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကနေတဆင့် ရှာတွေ့ပြီးလာပေးတာက ပိုပြီး ထူးခြားပါတယ်... အဲနောက်တစ်ခု စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာကတော့ ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ဖို့ ဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာတိုလေးပါပဲ' လို့ ပြောပါတယ်။
ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ဖို့ ဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာတိုလေးဟာ ရိုးရှင်းပြီး အင်မတန်မှ ယဉ်ကျေးတဲ့ စကားလုံးတွေသုံးထားပါတယ်။ ဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာ ရေးထားတာကတော့
"We are sorry... to have to leave this tag. However, our parking space is so limited we have to divide it up. A charge of 10 cents is made for your extra time. You may encloseadime in this envelope and deposit it in the red box located on the corner. We hope you understand our parking problem.Help us solve it, won't you?
Thanks! Come again!"
"အခုလို ဒီဖြတ်ပိုင်းလေး ချန်ခဲ့ပေးရတာ အထူးပဲ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ရပ်နားတဲ့နေရာတွေက တကယ့်ကို အကန့်အသတ်ဖြစ်နေလို့ ဒါကို အားလုံးအဆင်ပြေစေဖို့ အချိန်ခွဲသုံးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အချိန်ပို ရပ်နားမိချိန် ၁၀ပြားကို ကျွန်တော်တို့ ကောက်ခံရပါမယ်။ ဒီဆယ်ပြားကို အခုပါတဲ့စာအိတ်လေးထဲထည့်ပြီး လမ်းထောင့်က ပုံးနီနီလေးထဲကို ထည့်သွားခဲ့လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယာဉ်ရပ်နားမှု ပြဿနာ အခက်အခဲကို နားလည်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး ကူညီဖြေရှင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လဲ လာလည်ပါဦး'
ရဲမှုးကြီး ကလက်က သူတို့ဆီမှာ ဒီလို ယာဉ်ရပ်နားချိန်ပို ဒဏ်ကြေး ကောက်ခံတဲ့ အစဉ်အလာမျိုး တကယ်ရှိခဲ့တာ မှန်တယ်လို့ပြောပြီး... ဒီ ၅၇နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ ဖြတ်ပိုင်းလေးကို ဘောင်ခတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီရုံးခန်းထဲမှာ ချိတ်ထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by 925 at 18:45
သုက်ပိုးခိုးပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးယူကာ ကလေးစရိတ်တေ...
မလေးရှားတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် အငှားယာဉ်များ ချထား...
ယောက်ျား​​ဖြစ်သူ​အား​​ ​​ရောင်း​​ချလို​​ကြောင်း​​ ...
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ရှယ် ကိတ်မုန့်များ
ဂျပန် ငါးပြတိုက် တစ်ခုမှ လျှပ်စစ် ငါးရှဉ့်များ ခရစ...
facebook ပိတ်ပစ်တော့မည်ဟု facebook တွင်ပျံ့နှံ့
မောင့် ဖွားဖက်တော်ဖြင့် ကီလို ၂၃၀ ကို "မ" နိုင်သည်...
ကင်ဆာ ဆဲလ်များကို အရောင် တောက်လာစေသည့် ဓါတ်စမ်းပစ္စ...
ဆေးဖက်ဝင်သော သစ်သီးဝလံများဧ။် အခွံများ
Paracetamol ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ...
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ သမိုင်းကြောင်း (History oF Singapor...
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အမျိုး​​သမီး​​သား​​ဥ ​​ရောင်း​​ချ...
ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် လေလံဈေးနှင့် ရောင်းချခဲ့သည့် ဖာရာ...
US ဒေါ်လာ (၁.၃၇၅)သန်းဖြင့် လေလံတင် ရောင်းချခဲ့သည့် ...
ဘက်ထရီပြဿနာတက်နေတဲ့ Iphone 4s
လူနို့နှင့်တူညီသော နို့ ကို နွားမှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်မ...
စံပြုလောက်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့အတွက် အဓိကအချက် (...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်နိုင်ရေး ...
သွေးကင်ဆာ ရောဂါ ကုသရန် ဆေးဝါး အသစ် တစ်မျိုးကို အမေ...
အစ္စရေး သုတေသီများ လှုပ်ရှားသွားလာမှု အတွက် အကူအညီပေး...
Google က ဆုရလိုက်တဲ့ ၇နှစ်သမီးငယ်
ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ဆေးပြင်းလိပ် In Cuba
ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ice-...
Kiwi သီး စားခြင်းဖြင့် သွေးပေါင်ချိန် လျော့ကျစေခြင...
တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အရေခွံကို အရှင်လတ်လတ်ခွာယူတဲ့ တရုတ်ြ...
ကမ္ဘာ့ဈေး အကြီးဆုံး မုတ်ဆိတ်ရိတ်တံ ထွက်ပေါ်
ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်း ၀င်သွားပြီ ဖြစ်သည့် Tokyo Sk...
1680.. မွေးနေ့ကိတ် ပေါ်တွင် ဖယောင်တိုင်ထွန်းခြင်း သ...
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ဆေးထိုးသတ်ခဲ.ကြောင်း ဒေါက်တာမာေ...
အလင်းထုတ်နိုင်သည့် မှိုပင်တစ်မျိုးကို နှစ်ပေါင်း (၁...
ကားစီးရေ စီတန်းမောင်းနှင်ပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် လိုက...
အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးကို တီဗီ ကွန်ပျူတာ လုံးဝ ပေးမ...
ဂျာမနီတွင် လိင်ခွန် ကောက်ခံရေး မီတာများ တပ်ဆင်မည်
ရောဂါပိုးကူးစက် ၀င်ရောက်မှုကို သတိပေး အချက်ပြမည့် ပ...
တရုတ် တောင်ပိုင်းတွင် ကြေးနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ခေတ...
Abraham Lincoln ပုံတူ ရုပ်တုမှ ကြေးဓား တစ်ချောင်း ...
စင်္ကာပူက သန်းကြွယ်သူဌေး မိသားစုလိုက် အာကာသခရီးအတွက်...
ပညာရှင်များ သြစတြေးလျ ရှိ ဒိုင်နိုင်ဆော ခြေရာများက...
ဆေးခြောက်ပင်အား တရားဝင် ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အမေရိက...
ရှေးဟောင်း မွန်ဂို သဘောင်္ပျက် တစ်စီးကို ဂျပန် အနီးတ...
တောင်အာဖရိကတွင် ကြံ့ခိုးယူ သတ်ဖြတ်မှု စံချိန်တင် မြ...
မက္ကစီကိုနိုင်ငံတွင် ၁၀ နှစ်သမီးမှ ကလေးမွေးခဲ့ 
တူရကီခရီးသည်တင်သင်္ဘောကို ပြန်ပေးဆွဲသူ ကွန်မန်ဒိုတပ်...
ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့သည့် ရှေးဟောင်း ရောမ တပ်စခန်း တစ...
ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနှင့်တန်ဘိုးအကြီးဆုံး ရွှေပြားအား သြစ...
ပိုလန် တွင် ဘိုးအင်း ၇၆၇ လေယာဉ် ဝမ်းဗိုက်ဖြင့် ဆင်...
ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံး စိန် တစ်လုံးကို လေလံတင်ရောင်းချေ...
ငှက်ဖျား ကာကွယ်ဆေး တီထွင်ရန် နီးစပ်နေကြောင်း သိပ္ပံ...
အီတလီနှင့် ရုရှား ရေတပ်ဖွဲ့များ ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျ...
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် Draff ဖြင့် Car Parking ထိုးပြီး...
ဓါတုဗေဒဇယားတွင် နောက်ထပ်အမည်သစ် (၃) မျိုးတင်သွင်း
အန္တာတိတ် ရေခဲပြင်တွင် ကြီးမားသည့် အက်ကွဲကြောင်းကြီ...
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် သေဆုံးမှုတွင် ဆရာဝန်ဖြစ်သူ အပြစ်ရှိ...
ဗိုက်နာနေစဉ် ကားမောင်းလိုင်စင် အောင်အောင်ဖြေ ပြီြး...
ယာဉ်ရပ်နားချိန်ပို ဒဏ်ကြေး ဒေါ်လာ ၁၀ပြားကို ၅၇နှစ်အ...
ဖိလစ်ပိုင် တွင် ပနားမား ကုန်တင်သင်္ဘော တိမ်းမှောက်
တစ်လသား နိုက်ဂျီးရီးယား ကလေးငယ် အစိုးရ လစာရရှိ
HIV ရောဂါ၏ ပိုး၏ဗီဇသစ် တစ်မျိုး စင်္ကာပူတွင် တွေ့ရှိ...
ဖခင်နေရာအတွက် ဂျက်စတင်ဘီဘာ တရားစွဲခံရ
သွေး ပရိုတင်းတစ်မျိုး ဆန်မှ ထုတ်ယူနိုင်ပြီ
ဟော်လန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်တွင် ကုန်း/ရေ နှစ်မျိုးသွာ...
ကရင်၏ မူလ ဇာစ်မြစ်
2022 Qatar ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးကွင်းများ
ခေတ်အရမ်းရှေ့ပြေးလွန်းတဲ့ ခရီးသည်တင် Super Bus ကား...
Download သမားများ သတိပြုဖွယ်ရာ